Wararka Maanta: Talaado, Nov 6 , 2018-Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo la kulmay madaxda hay'adda DFID
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya hay’adda DFID iyo wasaaradda waxbarashada, gaar ahaan tageerada waxbarashada.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxa DFID uu sharaxaad ka siiyay guulaha laga gaaray qorshaha mideynta manhajka, shahaadooyinka iyo imtixaanaadka.
Mr Dhil ayaa tilmaamay in dowladdiisa iyo hay’adda uu madaxda ka yahay ay ka go’an tahay sidii loo kordhin lahaa tageerada waxbarashada.
Wasiirka waxbarashada iyo madaxda hay’adda DFID ayaa isku afgartay in la sii xoojiyo iskaashiga, isla markaana farsamo yaqaanada wasaarada iyo DFID ay u kulmi lahaayeen sidii ay hawlaha iyo qorshayaasha ka dhexeeya uga midho dhalin lahayeen.
Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go’an tahay tayeynta waxbarashada dalka iyo kor u qaadida tababarada macalimiinta.